Gweta riri muAmsterdam | Lawfirm, Gweta-pamutemo, Law & More
Iwe uri muzvinabhizimusi here kana kuti wakasarudzika iwe uri kutsvaga ruzivo rwakakosha, usingarasikirwe nekuona kwekuonana Ipapo Law & More ndiyo mutemo mutemo muAmsterdam kwauri. Law & More isimba rakasimba, rakawanda pamutemo dhizaini, iri muAmsterdam inosanganisa kuziva-kwehofisi hombe nekutarisira uye yakagadzirirwa basa raunotarisira kubva kuhofisi yeboutique. Uye nepo mamwe magweta emutemo anongopa rubatsiro rwepamutemo, magweta e Law & More enda nhanho imwe kumberi. Nyanzvi zvedu muAmsterdam vanopa kwete chete pamutemo rutsigiro uye kukubatsira iwe saano chipangamazano kana litigation zano, asi magweta at Law & More zvakare shanda semumwe wako anotsigira mumwe mumunda wepamutemo.
UNODA MLAYYERI MU AMSTERDAM?
Iwe uri muzvinabhizimusi here kana kuti wakasarudzika iwe uri kutsvaga ruzivo rwakakosha, usingarasikirwe nekuona kwekuonana Ipapo Law & More ndiyo mutemo mutemo muAmsterdam kwauri. Law & More isimba rakasimba, rakawanda pamutemo dhizaini, iri muAmsterdam inosanganisa kuziva-kwehofisi hombe nekutarisira uye yakagadzirirwa basa raunotarisira kubva kuhofisi yeboutique.
> Femu yemutemo muAmsterdam
Uye nepo mamwe magweta emutemo anongopa rubatsiro rwepamutemo, magweta e Law & More enda nhanho imwe kumberi. Nyanzvi zvedu muAmsterdam vanopa kwete chete pamutemo rutsigiro uye kukubatsira iwe saano chipangamazano kana litigation zano, asi magweta at Law & More zvakare shanda semumwe wako anotsigira mumwe mumunda wepamutemo. Tine timu yakasimba, yakasarudzika timu yemagweta yakagadzirira kukubatsira kugadzirisa dambudziko rako repamutemo munzira ipi neipi. Iwe unoda kuziva nezve yedu yekushandisa nzira? Saka ndapota taura nesu.
Fona +31 20 369 71 21
Nyanzvi dze Law & More muAmsterdam
Sesimba remutemo Law & More inoshanda muminda yemitemo yemubatanidzwa, mutemo wepfungwa wepfungwa nehunyanzvi, pamwe nemutemo wevashandi, mutemo wekubuda uye mutemo wemhuri. Uri kutsvaga imwe nzvimbo yemutemo? Wobva watarisa kune yedu nyanzvi appraisals peji pairi nharaunda dzese dzemutemo dzakanyorwa. Magweta edu inyanzvi munzvimbo dzese dzinotaurwa uye anofara kukubatsirai mune chero nzvimbo. Kana zvasvika pasi kumakambani, Law & More zviitiko zvevamabhizinesi mumapazi akasiyana siyana, akadai seindasitiri, zvifambiso, zvekurima, zvehutano nekutengesa. Uye zvakare, magweta edu muAmsterdam ane ruzivo rwakawanda mukushandira makambani ekuvandudza uye kubatsira kana kutungamira kutanga-ups. Magweta edu anoshandiswa kushanda muminda yetekinoroji, kutsvagisa, kusimudzira, kodzero dzekambani yekugadziriswa, kupa marezinesi nekugadzira kuwedzera.
Femu yemutemo muAmsterdam
Pamusoro pekuziva kwedu kwakawandisa mutemo weDutch (maitiro), mutemo wedu wekambani ndewepasi rese maererano nehukuru uye hunhu hwemasevhisi edu uye unoshanda kune akasiyana nevatengi veDutch uye vekunze vatengi, kubva kumakambani nemasangano kuvanhu. Kuitira kupa vatengi vedu basa rakanakisa rekugona, isu tine timu yakazvitsairwa yemitauro yakawanda magweta uye majaji, anokwanisa mutauro weRussia, pakati pezvimwe zvinhu. Ivo vanokwanisa kukutungamira uye nekukubatsira iwe kubva pakutanga kusvika kumagumo ezvese zvamaitiro ezvemitemo, vachiisa basa ravo pane yakanyatsofungwa, zano repamberi. Pasinei nerudzi, iyo nheyo huru kune Law & More ndeyekuti munhu wese anofanirwa kuve nemukana wekumiririra kodzero dzawo. Magweta edu saka anovavarira iwo akanakisa mutengo-mhando chikamu kune vatengi vedu. Izvi zvinovimbisa kuti iwe unogamuchira rubatsiro rwepamutemo padanho rakakwira uye kuti kudyara kwako kuchazvibhadhara pachako.
Saka, apo zvakajairika magweta anongopa ruzivo rwepamutemo uye neziso rakaoma, magweta edu muAmsterdam anopa basa rakawanda kupfuura mamwe mafemu emutemo. Law & More timu muAmsterdam inoshanda nenzira inoshanda uye yakasarudzika kumakambani epasi rese neenyika uye akazvimirira. Kuhofisi yedu muAmsterdam tine maawa akareba ekuvhura uye anovhurwa manheru uye nevhiki. Magweta edu akajairira kushanda nekukurumidza, kuitira kuti iwe usazombofa wakamirira kwenguva refu mhinduro kune yako e-mail kana usati iwe uine mumwe wevashandi vedu parunhare. Kunyangwe maawa ekunze emahofisi iwe unogona kugara uchisvika kune rimwe remutemo wedu. Kumhanyisa uye hunyanzvi hwakakosha zvakanyanya kwatiri, zvinoreva kuti iwe unogona kutarisira kudyidzana uye kwakatarisana kutaurirana. Uri kufarira basa redu here? Saka ndapota taura nesu. Magweta a Law & More vari pabasa rako!
Iwe unoda kuziva chii Law & More anogona kukuitira iwe semitemo kambani muAmsterdam?
Wobva watibata parunhare +31 20 369 71 21 kana tumira e-mail ku: